Visa bakhtiyaa (Barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala duwanaanta) | USAHello | USAHello
Visa bakhtiyaa (Barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala duwanaanta)
Barnaamijka Visa Diversity Immigrant waxaa sidoo kale loo yaqaan Barnaamijka dhibaataynta qoyska, bakhtiyaa fiisada, ama bakhtiyaa cagaaran card. Sannad kasta ka 1995 in 2020, USA ka abaalmariyey 50,000 fiisooyinka marayo barnaamijka. Dadka is doortay by xulashada random (by fursad) bakhtiyaanasiibka fiisada. Haddii aad ku guuleysato fiiso, aad ku noolaan karaan, shaqada, iyo waxbarasho USA. Ka dib markii ay 5 sano, waxaad dalban kartaa dhalashada.
bakhtiyaanasiibka kugalka 2020
Waxaa jiray 50,000 fiisooyin kala duwan la siiyaa 2020 United States 'bakhtiyaa visa. diiwaangelinta furay on October 3, 2018. Waqtiga ugu ahaa on November 6, 2018, at 12:00. bakhtiyaa ee 2020 imika la xidhay.
barnaamijka lottery visa ee 2021
Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan barnaamijka weli kala duwanaanta fiisaha muhaajiriinta ee 2021. Waxaan u cusbooneysiin doonaa this page marka ay jirto news.
Yaa codsan kara bakhtiyaa fiisada?
Waa in aad haysataa waxbarashada dugsiga sare ama shahaadada in uu yahay la mid ah sida shahaadada dugsiga sare
Waa in aad tustaa in aad leedahay laba sano oo waayo aragnimo shaqo ee shaqo u baahan in ugu yaraan laba sano oo tababar ah ama waayo-aragnimo. Aad waayo-aragnimo waa in uu ahaadaa in shantii sano ee la soo dhaafay.
Waa inaad buuxisaa ah (DS-260) codsiga online inta lagu jiro xilliga diiwaangelinta. Waxaad ma soo gudbin kartaa entry mararkii hore oo kale.
Digniin ku saabsan visa khiyaamo bakhtiyaa
Waxaa jira websites iyo dad badan in ay isku dayaan inay kugu khayaanaan siinayo lacag si aad u hesho fiisaha US a. Ha rumaysan. Uma baahnid in aad bixiso. Tusaale ahaan, website a sida www.usgreencardoffice.com idinku dhaarinayaa doonaa $98 si aad u gudbiso codsigaaga. websites kale iska waxay websites rasmiga ah ee Dawladda. Xusuusnow:
Waa lacag la'aan in ay galaan bakhtiyaanasiibka fiisada
Waxaad ma kordhin kartaa fursadda guusha aad by bixinta
waxaad ka akhrisan kartaa Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fiisa visa kala duwanaanta. Oo waxaad kaloo sameyn kartaa ka heli kartaa macluumaad rasmi ah oo gali bakhtiyaa fiisada.
Daawo this video ah oo ku saabsan sida loo codsado in bakhtiyaanasiibka
Dadka aan codsan kartaa fiise kala duwan
fiisooyinka Diversity tagaan dadka ka yimid dalalka kuwaas oo aan si USA soo diray waddanka u soo guurey badan sanadihii hore. Tusaale ahaan, dadka ka yimid wadamada aanay u banaanayn dalbato 2020:
Shiinaha (dhulweynaha dhashay)
Boqortooyada Ingiriiska (marka laga reebo Northern Ireland) iyo dhulal ay ku tiirsan
Ha ka Yeelina u badan hal codsiga. Waxaad laga saari doonaa bakhtiyaanasiibka.
Urursada macluumaadka oo dhan ka hor inta aadan bilaabin inaad buuxiso foomka. Tani waxay ka dhigi doonnaa habka fudud kuu.
Hubi in aad buuxiso dhammaan entries foomka.
Eeg bogga internetka ee ah Safaarada Maraykanka ama qunsuliyadda ee dalka si aad u ogaato in dalka laga heli karaa warbixin dheeraad ah bakhtiyaa.
Yukreeniyaan luqadda / Yukreeniyaan
Faransiis / Faransiis
Talyaani / Italiano
Isbaanish / Isbaanish
Carabi / Carabi
Usbakis /(account o'zbek)/
Keena Ehelkiinna in America
Qaado our fasalka dhalashada online lacag la'aan ah
Ogow sida loo codsado dhalashada
Agabyo Faa'iido leh
digniin Khayaanada ka US Department of State
Macluumaadka on this page waxa laga soo qaatay ee US Department of State. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.